मसँग कुनै प्रतिस्पर्धा छैन | Martech Zone
सोमबार, नोभेम्बर 16, 2009 आइतवार, नोभेम्बर 3, 2013 Douglas Karr
मलाई थाहा छ कि अहंकारी लाग्यो। मेरो मतलब यो छैन। जब कोही कसैले काम गर्ने कम्पनीमा प्रतिस्पर्धाको उल्लेख गर्थे, मैले ठट्टा गरे। मसँग सधै हुन्छ। कसैले मलाई एकचोटि भन्यो कि तपाईको पछाडि फर्केर हेर्नु असम्भव छ र अझै शीर्ष गतिमा अगाडि बढ्नुहुन्छ। मलाई डर छ पक्षाघात भएका कम्पनीहरूलाई।
म विश्वास गर्दछु सह-अपरेसन.
म वकालत गरिरहेको छैन बेवास्ता तपाईंको प्रतिस्पर्धा ... प्रत्येक कम्पनीले ती टेबुलमा ल्याउने फाइदाहरू बुझ्नु पर्छ। तपाइँको प्रतिस्पर्धी फाइदाहरू भन्दा बढि महत्त्वपूर्ण, यद्यपि, त्यहाँ यी सुविधाहरू र बीचमा एक मेल छ कि छैन ग्राहकको वास्तविक आवश्यकताहरू। म अहिले नै शुरुवातबाट मेरो व्यवसाय बढ्दैछु र पहिलो दिनमा मैले प्रत्येक काममा लिएँ जुन मैले आफू बस्न सक्दछु भनेर सुनिश्चित गर्न मैले गर्न सक्ने प्रत्येक काममा लिएँ। पछाडि, त्यो राम्रो निर्णय थिएन ... म ती प्रोजेक्टहरूमध्ये धेरैलाई उल्लेख गर्न सक्थें र ग्राहकहरू त्यति खुशी भए होलान्, अझ खुशी थिए होलान्।
मेरो फोकसले अब ठूला एजेन्सीहरू, सार्वजनिक सम्बन्ध फर्महरूसँग साझेदारी सिर्जना गर्दैछ र मसँग धेरै ठूला ग्राहकहरूसँगको सम्बन्धहरू वृद्धि गर्न जारी राख्दछ। यो हप्ता, मैले दुई राम्रा सम्भावनाहरूलाई संकेत गरें मेरो प्रतियोगिता। यो गर्न सही कुरा थियो। म यी सम्बन्धहरू उनीहरूलाई योग्यको ध्यान दिएर प्रदान गर्न सक्दिन र मसँग उनीहरूको सफलता सुनिश्चित गर्न संसाधनहरू छैनन् ... त्यसो भए म किन यसमा मेरो प्रतिष्ठा जोखिममा पार्नेछु?
यहाँ इण्डियानापोलिसमा, प्रतिभावान व्यक्तिको एउटा ठूलो समूह छ जुन मैले प्रदान गरेको समान सेवाहरू प्रदान गर्न सक्दछु। कम्पनीहरू जस्तै ExactTarget, दायाँ अन्तर्क्रियात्मक, कम्पेन्डियम, र वेब डिजाइन र विकास एजेन्सीहरूको संख्याहरू उत्पादन र सेवाहरू छन् जुन मैले प्रदान गर्न सक्दछु… तर म गर्दिन। उनीहरूसँग लगानी, पूर्वाधार, ग्राहक समर्थन र संसाधनहरू छन् जुन मसँग छैन। त्यो ग्राहकको लागि राम्रो छ।
सोशल मिडिया पक्षमा, हामी सहरमा धेरै थोरै छौं ... जसलाई विश्वास गर्छु तिनीहरू सबै मेरो साथी हुन्। जब हामी शहरका केही ठूला निगमहरूको नजिक जान्छौं, हामी प्रत्येकले आ-आफ्ना दृष्टिकोणलाई तालिकामा ल्याउँदछौं। म उनीहरूसँग यस स्तरमा प्रतिस्पर्धा गर्ने बारेमा चिन्तित छैन। फेरी, मँ अधिक चिन्तित छु कि कम्पनीले पायो ठिक स्रोत यदि मैले तिनीहरूलाई सन्दर्भ गरेँ र यो एक सफल हो भने, हामी सबै जित्दछौं। म उनीहरुलाई संदर्भित गर्नका लागि धेरै राम्रो देखिन्छु, मेरो प्रतिस्पर्धा व्यापार हुन्छ, र अर्को अवसरमा म पहिलो कल पनि प्राप्त गर्नेछु।
हालसालै, एउटा (विशाल) स्थानीय कम्पनीले मलाई उनीहरूलाई केहि निःशुल्क सेवाहरू प्रदान गर्न दबाब दिन रनआराउन्ड दियो। मैले केवल उनीहरूलाई सहयोगीलाई जनाएँ जसले पहिले मसँग जाँच गरे। जब त्यो पछाडिबाट फर्किए, तिनीहरू मतिर फर्किए र म तिनीहरूलाई रूची राख्दिन भनेर बताएँ।
अर्को तर्फ, शहरमा केही एजेन्सीहरू छन् जुन अब गर्वका साथ खोजी इन्जिन अप्टिमाइजेसन वा सोशल मिडिया विशेषज्ञताको मोनिकर लगाउँछन्। यद्यपि उनीहरूले उनीहरूको स्टाफमा त्यो विशेषज्ञताका साथ कसैलाई पनि थपेका छैनन्, न त ती क्षेत्रका ग्राहकहरूसँग उनीहरूको कुनै नतिजा छ, ती सेवाहरूको खोजीमा रहेका कम्पनीहरूले उनीहरूको शिकार गर्न जारी राख्छन्। तिनीहरू अवसरवादीहरू हुन्, हरेक सेवाहरू प्रदान गर्दछ जुन कोही पनि सोध्न ख्याल गर्दछ। मलाई उनीहरूले के गरिरहेको छैन मनपर्दैन र म सकेसम्म उनीहरूको बिरूद्ध बोल्छु।
यदि तपाईं खोज्दै हुनुहुन्छ भने खोज इन्जिन अनुकूलन प्रदायक, केहि खोज गर्नुहोस् र तपाईले फेला पार्नुहुनेछ कि कसले खोजी जित्दै छ। यो सजिलो छ। यदि तपाईं खोज्दै हुनुहुन्छ भने सामाजिक मिडिया विज्ञ, केहि क्षेत्रीय घटनाहरूमा भाग लिनुहोस्, को सफल क्षेत्रीय नेटवर्क को शुरू भयो जाँच गर्नुहोस्, र को अनुसरण को ठूलो अनुगमन छ। यो धेरै स्पष्ट हुन्छ कि कससँग विशेषज्ञता छ र कोसँग छैन। अवसरवादीहरूले आँसुको निशान छोड्छन्।
मलाई विश्वास छैन मसँग प्रतिस्पर्धा छ। मेरो काम यो हेर्नु हो कि म कम्पनीले पाएको पीडाको लागि फिट छु कि छैन। यदि म फिट छैन भने, म अगाडी बढ्दैछु। यसैले मेरा व्यस्तताहरू बढ्दै छन्, मैले रमाइलो चीजहरूमा काम गर्न अधिक समय पाइरहेको छु, मेरा ग्राहकहरू उनीहरूले चाहेको नतिजा देखिरहेका छन्, र म खुशी छु… र अझै विच्छेद भयो;)।
तिम्रो के बिचार छ? के तिमी साँच्चै कुनै प्रतिस्पर्धा छ?
टैग: व्यापारव्यापार सम्बन्धसह-अपरेसनप्रतियोगिताकोओपिटिशनबिक्री सक्षमता
ठिक छ तपाइँको काम भनेको यो सुनिश्चित गर्नु हो कि तपाइँसँग व्यापार गर्न चाहने कम्पनीहरूले तपाइँका लक्ष्यहरू र मानहरू साझेदारी गर्न सँगै काम गर्दछन्। तर यो जान्नु राम्रो हुन्छ कि तपाईले रोलिंग गरिरहनु भएको छ र प्रत्येक ग्राहकले तपाइँले सोध्नुभएको कारण मात्र गर्न माग्दै गरेकोमा।
मनोवैज्ञानिक, मैले मैट पूरा गरें। यद्यपि मसँग ह्यान्डल गर्न अझै बाँकी छ। 🙂
"कसैले मलाई एकचोटि भन्यो कि तपाईको पछाडि फर्केर हेर्नु असम्भव छ र शीर्ष गतिमा अगाडि बढ्नु हुन्छ।"
म पूर्ण सहमत! हालसालै हामीसँग दुई कम्पनीहरू छन् जसले समान सेवाहरू कल र हाम्रो सेवाहरू प्रयोगमा रुचि राख्ने बहाना गर्दछ। तिनीहरू पर्याप्त विस्तृत थिए, यद्यपि हामीलाई उनीहरूको सन्दर्भमा बताउने व्यक्तिको नाम दिनसम्म जान्छन्। त्यसोभए जब तिनीहरूले हाम्रो वेबसाइटमा फारमहरू भर्दै थिए, भ्वाइसमेल सन्देशहरू कल गर्दै र छोड्दै थिए, र हामीलाई अधिक जानकारीको लागि ईमेल गर्दै हामी सम्भावित ग्राहकहरूसँग कुरा गर्दै थियौं। सम्भावितहरूसँग राम्रो कुराकानी गर्न र उत्तम ग्राहक सेवा प्रदान गर्न उनीहरू आफ्नो समय बिताउँथे।
बाँकीका लागि, म पनि सहमत छु। आफ्नो क्षमताहरु लाई जान्नुहोस्। क्षमता र संसाधनहरू। तपाईका वरपरका मानिसहरुसंग परस्पर लाभदायक सम्बन्धहरु बनाउनुहोस्। सबैले त्यसपछि जित्छन्।
शानदार पोष्ट, डग। म तनमनले सहमत छु।
मूल प्रतिस्पर्धाको ल्याटिन अनुवादलाई ध्यान दिन रोचक छ, "सबैको भलाइका लागि सँगै संघर्ष गर्नु हो।" विजेता र हारेको धारणा फ्रान्सेलीले १ 16 औं शताब्दीमा प्रस्तुत गरेको थियो। यो भ्यागुता छोड्नुहोस्, ए?
अद्भुत उद्धरण, एमी! मैले कहिले पनि महसुस गरिनँ कि ... केटा हामी यहाँ अमेरिकामा त्यो शब्द दुरुपयोग गर्छौं!
म तपाईंसँग पूर्ण रूपमा सहमत छु कि धेरै व्यक्तिहरूले उनीहरूको एसईओ लक्षहरू राख्ने प्रदायकहरूलाई नि: शुल्क सेवाहरू प्राप्त गर्न खोजिरहेका छन्। टाउकोहरु को लागी धन्यवाद।
म योसँग अधिक सहमत हुन सक्दिन। मलाई लाग्छ धेरै धेरै समय खर्च गरीरहेको छ प्रतिस्पर्धीहरूका बारे। विशेष गरी बजारमा सामाजिक मिडिया र एसईओ जस्ता गतिशील, जुन यति चाँडो बढ्दैछ, प्रतिस्पर्धाको लागि धेरै ठाउँहरू छन्, र तपाईं मर्नु पर्ने बढी सम्भावना हुनुहुन्छ किनभने तपाईं ग्राहकहरूसँग राम्रो पign्क्तिबद्ध हुनुहुन्न किनभने तपाईंको प्रतिस्पर्धीहरूले तपाईंको खाजा खाइरहेका छन्। ।
डग - सँधै, मलाई तपाईंको दृष्टिकोण मनपर्दछ। म सँधै दिमागमा रहन्छु कि जब यो रेफरलहरूको बनाम आउँछ। बनाम आफैंको व्यापार गरिरहनुपर्दछ, जबसम्म ग्राहक खुसी हुन्छ, तिनीहरूले सम्झन्छन् कि तपाईंले उनीहरूलाई खुशी पार्नुभयो, चाहे यो केवल एक रेफरलको साथ भए पनि। हिड्ने एक हिट को रूप मा राम्रो छ, सही?
साथै, प्राय जसो कम्पनीहरूले यो जान्न सम्पूर्ण ईमानदारी पक्षलाई महत्त्व दिन्छन् कि तपाइँले केहि मागिरहनुभएको छ जुन तपाइँले गर्न सक्नुहुन्न वा प्रयास गर्नुहुन्न र यसको बारेमा इमानदार हुनु हुँदैन। यदि कम्पनीले यसको मोल गर्दैन र केवल पैसालाई बचत गर्ने बारेमा चिन्तित छ, त्यसोभए तपाईं तिनीहरूलाई ग्राहकको लागि चाहानु हुन्न, हैन? भन्न सजिलो छ र हालको आर्थिक परिदृश्यमा यसको साथ अनुसरण गर्न गाह्रो छ, तर अझै पनि शब्दहरू बाँच्न ... वा कमसेकम शब्दहरू द्वारा वितरण गर्न।
डग, म विश्वास गर्दछु जब तपाईं आफ्नो बहुमूल्य समय खर्च गर्नुहुन्छ प्रतिस्पर्धाले के गरिरहेको छ भनेर चिन्तित गर्दा तपाईं कि त हुनुहुन्छ: (१) ऊब र फोकस गरिएको, वा (२) तपाईंलाई तपाईंको मार्ग कस्तो हुनुपर्छ भन्ने बारे कुनै विचार छैन। प्रगतिशील हुनु र तपाईंको वरिपरिको प्रतिक्रियावादी नभएको सफलताको सार हो।
नोभेम्बर,, २०१ at 21::2009 बिहान
डग - महान पोष्ट! म मेरो क्यारियरको शुरुमा कम्पनीमा धेरैले सैन्य सर्तहरूको प्रयोग सम्झन्छु: युद्ध, युद्ध, रणनीति, कार्यनीति, र यस्तै। हामी अन्य कम्पनीहरूले के गरिरहेका थिए भनेर चिन्तित थियौं। मेरो कम्पनी संग, म अन्य मान्छे को बारे मा चिन्ता गर्न सक्दिन। हामीले हाम्रो ग्राहकहरूको लागि सबै भन्दा राम्रो उत्पादनहरू र सेवाहरू पुर्‍याउनमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्दछ। कहिलेकाँही हामी "अवसर" बाट टाढा हिँड्यौं; अन्य समयमा हामीले कसैलाई पास गरेका छौं। मेरो विचारमा त्यहाँ जानको लागि धेरै कुरा छ, जबसम्म हामी टेबलमा ल्याउने मूल्यमा केन्द्रित हुन्छौं।
मलाई तपाईंको ग्राहकहरूको आवश्यकताहरू राख्ने दर्शन मनपर्दछ
पहिलो रूपमा म असाधारण ग्राहक सेवा प्रदान गर्ने एक ठूलो प्रशंसक हुँ। म उत्सुक छु
यदि कम्पनीहरु जुन तपाईले ग्राहकहरु लाई पठाउनु भएको छ को पक्ष फिर्ता गर्दै छन्
तिनीहरूले एउटा ग्राहक पाउछन् जुन उनीहरूसँग मिल्दैन। के तपाईं तिनीहरूबाट धेरै सन्दर्भ प्राप्त गर्नुहुन्छ
वा तपाइँ केवल ग्राहकलाई सहि सहायता गर्ने राम्रो कर्ममा विश्वास गर्नुहुन्छ?